သင့်မှာလည်း OCD ဆိုတဲ့စိတ်ရောဂါအနုစားတစ်မျိုး ရှိနေနိုင်ပါတယ်…🤔 – Trend.com.mm
သင့်မှာလည်း OCD ဆိုတဲ့စိတ်ရောဂါအနုစားတစ်မျိုး ရှိနေနိုင်ပါတယ်…🤔
Posted on August 14, 2018 by Noel
OCD ဆိုတဲ့စိတ်ရောဂါအနုစားတစ်မျိုးက လူတိုင်းနီးပါးမှာရှိနေတတ်ပါတယ်။Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ရောဂါအနုစားဆိုတာ လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ အလွန်အကျွံစွဲလမ်းမှုလို့ပြောရမလားပဲ။မီးခလုတ်ပိတ်ပြီးသားကို ပိတ်ပြီးပြီလားမသိဘူးဆိုပြီး ထပ်ခါထပ်ခါသွားစစ်မိနေတာမျိုး၊ကားတံခါးလော့ခ်ချခဲ့ပေမဲ့ လော့ခ်ချခဲ့ရဲ့လားဆိုပြီး ခဏခဏသွားသွားစစ်နေတာမျိုးကလည်း OCD တစ်မျိုးပါပဲ။မေ့တာလည်းမဟုတ်ပဲထပ်ပြီးသေချာအောင်လုပ်နေတာမျိုးပါ။မီးဖိုကို ပိတ်ခဲ့ရဲ့လားလို့ အခါ ၂၀လောက်စစ်နေမယ်။လက်ဆေးပြီးသားကို မပြောင်သေးဘူးဆိုပြီး အခါ ၂၀လောက်ဆေးနေတယ်ဆိုရင် ဒါက သင့်မှာ OCDဆိုတဲ့ရောဂါရှိနေပါပြီ !
စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တာမျိုးပေါ့။မလိုအပ်တဲ့အတွေးတွေက သင့်ခေါင်းထဲမှာရှိနေမယ်။သင်က ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင် သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ပဲ လုပ်မိနေတာပါ။OCD ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲ။လူတော်တော်များများက ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ချက်နဲ့ငြိစွန်းနေတတ်ပါတယ်။
*ဘာနဲ့ပဲထိလိုက် ထိလိုက် ရောဂါပိုးမွှားတွေကပ်တွယ်လာမှာစိုးလို့ လက်ကိုအထပ်ထပ်အခါခါဆေးမိနေတယ်။အသန့်ကြိုက်ရောဂါတစ်မျိုးပေါ့။
*စစ်ဆေးပြီးသားအရာတစ်ခုကို စစ်ပြီးပြီးဆိုတာသေချာရဲ့လားသိရအောင် ထပ်ခါထပ်ခါသွားသွားစစ်နေတယ်(တံခါးပိတ်ပြီးသားကို ပိတ်ပြီးရဲ့လား ခဏခဏသွားသွားစစ်နေတာမျိုး)
*အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုမအောင်မြင်ဘူး၊မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင် တစ်ခုခုဆိုးဝါးတာပဲဖြစ်လာတော့မလိုတွေးပြီးကြောက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ် အပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုပြီးတွေးပြီးကြောက်နေတယ်။
*ဂဏန်းတွေ၊အရောင်တွေ၊အပြင်အဆင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Serious ဖြစ်တယ်။ဥပမာ ဗီရိုထဲက အကျီတွေကို အရောင်အလိုက်စီတာမျိုး၊ဘယ်နှစ်ထည်အလိုက်စီတာမျိုး၊ဧည့်ခန်းထဲက ပစ္စည်းတွေ ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဆို နောက်နေ့လည်းဒီနေရာမှာပဲထားတယ်။ရွေ့နေလည်းပြန်စီတယ်။စာအုပ်တွေစီရင်လည်း ဒီနေ့ဒီစာအုပ်က အောက်ဆုံးမှာ နောက်နေ့လည်းအောက်ဆုံးမှာပဲပြန်ထားတာမျိုးကိုပြောတာပါ။
*ကိုယ့်ဆီမှာမလိုတာတစ်ခုခုကို မသုံးတော့ဘူး။လွှင့်ပစ်ရမယ်ဆိုရင်တောင် လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါ တစ်ခုခုအဆင်မပြေတာဖြစ်လာမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတယ်။ပြီးတော့ ကိုယ်မလိုလည်း ပစ္စည်းတွေကိုလွှင့်မပစ်ပဲ စုထားတတ်တယ်။အမှိုက်အစ အသုံးဝင်လာမလားမသိဘူးဆိုပြီးစုဆောင်းထားတတ်တယ်။
*သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်လည်း ချောင်ကြိုချောင်ကြားကအစပြောင်ရှင်းနေမှ၊အမှိုက်တစ်စတွေ့ရင်တောင် မသန့်ရှင်းသေးဘူးဆိုပြီးထပ်လှည်းနေတာမျိုး၊ဘယ်အရာမဆို တိတိကျကျဖြစ်ချင်နေတာမျိုး။
ဒီထဲကတစ်ချက်ချက်နဲ့ငြိစွန်းနေရင်တောင် နေ့တိုင်းလိုလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မှာ OCD မရှိဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ နေ့တိုင်းလိုလိုဒီအချက်တွေထဲကတစ်ချက်ချက်အတိုင်း အမြဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ဒါကြီးကစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။စိတ်ဖိစီးမှုများလာတာက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းသလို ရေရှည်အတွက်လည်း အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့် ဒီ OCD စိတ်ရောဂါအနုစားကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါမယ်။
တကယ်လို့ သင့်မှာ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအတိုင်း တစ်ချက်မကဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သင်လုပ်ရမှာက အဲ့ဒီစိတ်ကို အလိုမလိုက်ဖို့ပါပဲ။ဥပမာ သင်က တံခါးကိုသေချာလော့ခ်ချခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာတော့ တံခါးကိုသွားပြန်စစ်ချင်လာမယ်။သင့်စိတ်ထဲမှာသေချာပြီးသားအရာဆိုပေမဲ့ ထပ်ပြီးသေချာအောင်လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာမယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဆို သွားပြန်စစ်ကြည့်လိုက်။ဒုတိယတစ်ခါလည်းသွားပြန်စစ်ကြည့်ပြီးသားကိုမှ ထပ်ပြီးစစ်ချင်လာတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်စိတ်ကိုအာရုံလွှဲဖို့လိုလာပါပြီ။ဘယ်လိုလွှဲရမလဲဆိုတော့…အောက်ဆင်းပြီးလမ်းသွားလျှောက်လိုက်တာမျိုး၊လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနှစ်ခုထလုပ်လိုက်တာမျိုး၊သီချင်းနားထောင်တာ၊စာဖတ်တာ၊ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ဂိမ်းကစားတာ၊ဖုန်းပြောတာမျိုးနဲ့ သွားပြန်စစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအာရုံလွှဲပါ။
အနည်းဆုံး ၁၅မိနစ်လောက် အာရုံလွှဲထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင် အရင်ကလို ချက်ချင်းသွားသွားပြန်စစ်နေတာမျိုးမဖြစ်တော့ပဲ စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။၁၅မိနစ်ကနေ နာရီဝက်၊နာရီဝက်ကနေ တစ်နာရီစသဖြင့် အာရုံလွှဲတာအချိန်ကြာလေလေ သင့်ရဲ့ အလွန်အကျွံဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပူပန်မှုကြီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတစ်ခြားအချက်တွေသင့်မှာရှိနေရင်လည်း နည်းနည်းချင်းစီချိုးဖောက်ကြည့်ပါ။ကိုယ့်အတွက်မလိုတာတွေကို နည်းနည်းချင်းစီကြိုးစားပြီးလွှင့်ပစ်ပါ။သင်စိုးရိမ်ထားသလိုမဖြစ်လာဘူးဆိုတာ လက်ေတွ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းသင့်ရဲ့ OCD ကိုကြိုးစားပြီးဖျောက်သင့်ပါတယ်။
OCD ဆိုတဲ့စိတျရောဂါအနုစားတဈမြိုးက လူတိုငျးနီးပါးမှာရှိနတေတျပါတယျ။Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)လို့ချေါတဲ့ စိတျရောဂါအနုစားဆိုတာ လှယျလှယျပွောရရငျတော့ အလှနျအကြှံစှဲလမျးမှုလို့ပွောရမလားပဲ။မီးခလုတျပိတျပွီးသားကို ပိတျပွီးပွီလားမသိဘူးဆိုပွီး ထပျခါထပျခါသှားစဈမိနတောမြိုး၊ကားတံခါးလော့ချခခြဲ့ပမေဲ့ လော့ချခခြဲ့ရဲ့လားဆိုပွီး ခဏခဏသှားသှားစဈနတောမြိုးကလညျး OCD တဈမြိုးပါပဲ။မတေ့ာလညျးမဟုတျပဲထပျပွီးသခြောအောငျလုပျနတောမြိုးပါ။မီးဖိုကို ပိတျခဲ့ရဲ့လားလို့ အခါ ၂ဝလောကျစဈနမေယျ။လကျဆေးပွီးသားကို မပွောငျသေးဘူးဆိုပွီး အခါ ၂ဝလောကျဆေးနတေယျဆိုရငျ ဒါက သငျ့မှာ OCDဆိုတဲ့ရောဂါရှိနပေါပွီ !
စိတျကိုမထိနျးခြုပျနိုငျတာမြိုးပေါ့။မလိုအပျတဲ့အတှေးတှကေ သငျ့ခေါငျးထဲမှာရှိနမေယျ။သငျက ဒီလိုမြိုးမဖွဈခငျြဘူးဆိုရငျတောငျ သငျ့ရဲ့စိတျကိုမထိနျးနိုငျပဲ လုပျမိနတောပါ။OCD ဆိုတာ ဘယျလိုပုံစံမြိုးတှလေဲ။လူတျောတျောမြားမြားက ဒီအခကျြတှထေဲက တဈခကျြခကျြနဲ့ငွိစှနျးနတေတျပါတယျ။
*ဘာနဲ့ပဲထိလိုကျ ထိလိုကျ ရောဂါပိုးမှားတှကေပျတှယျလာမှာစိုးလို့ လကျကိုအထပျထပျအခါခါဆေးမိနတေယျ။အသနျ့ကွိုကျရောဂါတဈမြိုးပေါ့။
*စဈဆေးပွီးသားအရာတဈခုကို စဈပွီးပွီးဆိုတာသခြောရဲ့လားသိရအောငျ ထပျခါထပျခါသှားသှားစဈနတေယျ(တံခါးပိတျပွီးသားကို ပိတျပွီးရဲ့လား ခဏခဏသှားသှားစဈနတောမြိုး)
*အလုပျကိစ်စတဈခုမအောငျမွငျဘူး၊မပွညျ့စုံသေးဘူးဆိုရငျ တဈခုခုဆိုးဝါးတာပဲဖွဈလာတော့မလိုတှေးပွီးကွောကျနတေယျ။ဒါမှမဟုတျ အပွဈပေးခံရမယျဆိုပွီးတှေးပွီးကွောကျနတေယျ။
*ဂဏနျးတှေ၊အရောငျတှေ၊အပွငျအဆငျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး Serious ဖွဈတယျ။ဥပမာ ဗီရိုထဲက အကြီတှကေို အရောငျအလိုကျစီတာမြိုး၊ဘယျနှဈထညျအလိုကျစီတာမြိုး၊ဧညျ့ခနျးထဲက ပစ်စညျးတှေ ဒီနဒေီ့နရောမှာဆို နောကျနလေ့ညျးဒီနရောမှာပဲထားတယျ။ရှနေ့လေညျးပွနျစီတယျ။စာအုပျတှစေီရငျလညျး ဒီနဒေီ့စာအုပျက အောကျဆုံးမှာ နောကျနလေ့ညျးအောကျဆုံးမှာပဲပွနျထားတာမြိုးကိုပွောတာပါ။
*ကိုယျ့ဆီမှာမလိုတာတဈခုခုကို မသုံးတော့ဘူး။လှငျ့ပဈရမယျဆိုရငျတောငျ လှငျ့ပဈလိုကျတဲ့အခါ တဈခုခုအဆငျမပွတောဖွဈလာမလားဆိုပွီးစိုးရိမျနတေယျ။ပွီးတော့ ကိုယျမလိုလညျး ပစ်စညျးတှကေိုလှငျ့မပဈပဲ စုထားတတျတယျ။အမှိုကျအစ အသုံးဝငျလာမလားမသိဘူးဆိုပွီးစုဆောငျးထားတတျတယျ။
*သနျ့ရှငျးရေးလုပျရငျလညျး ခြောငျကွိုခြောငျကွားကအစပွောငျရှငျးနမှေ၊အမှိုကျတဈစတှရေ့ငျတောငျ မသနျ့ရှငျးသေးဘူးဆိုပွီးထပျလှညျးနတောမြိုး၊ဘယျအရာမဆို တိတိကကြဖြွဈခငျြနတောမြိုး။
ဒီထဲကတဈခကျြခကျြနဲ့ငွိစှနျးနရေငျတောငျ နတေို့ငျးလိုလိုမဟုတျဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့မှာ OCD မရှိဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ နတေို့ငျးလိုလိုဒီအခကျြတှထေဲကတဈခကျြခကျြအတိုငျး အမွဲဖွဈနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ ဒါကွီးကစိတျဖိစီးမှုတဈခုဖွဈနပေါပွီ။စိတျဖိစီးမှုမြားလာတာက သငျ့ကနျြးမာရေးအတှကျမကောငျးသလို ရရှေညျအတှကျလညျး အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ဒါကွောငျ့ ဒီ OCD စိတျရောဂါအနုစားကို ဘယျလိုရငျဆိုငျရမလဲဆိုတာပွောပွပေးပါမယျ။
တကယျလို့ သငျ့မှာ အပျေါကပွောခဲ့တဲ့အခကျြတှအေတိုငျး တဈခကျြမကဖွဈနတေယျဆိုရငျ သငျလုပျရမှာက အဲ့ဒီစိတျကို အလိုမလိုကျဖို့ပါပဲ။ဥပမာ သငျက တံခါးကိုသခြောလော့ချခခြဲ့တယျ။ဟုတျပွီ။ဒါပမေဲ့ ၁ဝမိနဈလောကျကွာတော့ တံခါးကိုသှားပွနျစဈခငျြလာမယျ။သငျ့စိတျထဲမှာသခြောပွီးသားအရာဆိုပမေဲ့ ထပျပွီးသခြောအောငျလုပျခငျြစိတျဖွဈလာမယျ။ကောငျးပွီ။အဲ့ဒါဆို သှားပွနျစဈကွညျ့လိုကျ။ဒုတိယတဈခါလညျးသှားပွနျစဈကွညျ့ပွီးသားကိုမှ ထပျပွီးစဈခငျြလာတဲ့စိတျပျေါလာပွီဆိုရငျတော့ သငျ့စိတျကိုအာရုံလှဲဖို့လိုလာပါပွီ။ဘယျလိုလှဲရမလဲဆိုတော့…အောကျဆငျးပွီးလမျးသှားလြှောကျလိုကျတာမြိုး၊လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုနှဈခုထလုပျလိုကျတာမြိုး၊သီခငျြးနားထောငျတာ၊စာဖတျတာ၊ရုပျရှငျကွညျ့တာ၊ဂိမျးကစားတာ၊ဖုနျးပွောတာမြိုးနဲ့ သှားပွနျစဈခငျြတဲ့စိတျကိုအာရုံလှဲပါ။
အနညျးဆုံး ၁၅မိနဈလောကျ အာရုံလှဲထားလိုကျပါ။အဲ့ဒါဆိုရငျ အရငျကလို ခကျြခငျြးသှားသှားပွနျစဈနတောမြိုးမဖွဈတော့ပဲ စိတျကိုထိနျးခြုပျနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။၁၅မိနဈကနေ နာရီဝကျ၊နာရီဝကျကနေ တဈနာရီစသဖွငျ့ အာရုံလှဲတာအခြိနျကွာလလေေ သငျ့ရဲ့ အလှနျအကြှံဖွဈနတေဲ့စိတျပူပနျမှုကွီးကို ထိနျးခြုပျနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒီလိုပဲတဈခွားအခကျြတှသေငျ့မှာရှိနရေငျလညျး နညျးနညျးခငျြးစီခြိုးဖောကျကွညျ့ပါ။ကိုယျ့အတှကျမလိုတာတှကေို နညျးနညျးခငျြးစီကွိုးစားပွီးလှငျ့ပဈပါ။သငျစိုးရိမျထားသလိုမဖွဈလာဘူးဆိုတာ လကျေတှ့စမျးသပျကွညျ့ပါ။
ဒီနညျးလေးတှနေဲ့ပဲ ဖွညျးဖွညျးခငျြးသငျ့ရဲ့ OCD ကိုကွိုးစားပွီးဖြောကျသငျ့ပါတယျ။
သတ်မှတ်ဘောင်အတွင်းက ထွက်ပြီး မင်းရဲ့ Adventure Bucket List ကိုဖြည့်ဆည်းပါတော့
ထိုင်းနိုင်ငံက ပရိတ်သတ်တွေကြောင့် မျက်ရည်တွေမဆယ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Lisa